အဖြေရသည်တိုင်အောင် ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်း | Praying Through - 'Till You Get What You Ask For! | Real Conversion
ဩဂုတ်လ ( ၂၃ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ယေရှုက "အဆက်မပြတ်ဆုတောင်းခြင်း" အကြောင်းကို အလေးအနက်ထား သွန်သင်ထားပါသည်။ ဆုလိုသည်မှာ အဖြေရောက်မလာသည်တိုင် အောင် ကာလအတန်ကြာသော်လည်း တစ်စုံတစ်ခုကို ရအောင်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း မှာ "အဆက်မပြတ်ဆုတောင်းခြင်း" ၏အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရိုက် က ဤသို့ ဆိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အားမလျော့ဘဲဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုပြော ဆိုကြသည်တွင် ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်သည် မိမိ၏[ပြဿနာ] ကို ဘုရားသခင်ထံသို့ယူဆောင်သွားပြီး ဆုတောင်းခြင်း၏အဖြေ ကိုရသည်အထိ ဘုရားသခင်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည့်အကြောင်းကို ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုစောင့်စား ခြင်းမရှိလျှင် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်၏သေချာမှုကို လုံးဝမရ ဘဲဖြစ်နိူင်သည်။ ဆုတောင်းခြင်း၏အားမလျော့ဘဲ ဆုတောင်းခြင်း ၏ဥပမာအချို့ကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ နေဟမိက ရန်သူများ၏သိမ်းပိုဒ်ဖျက်ဆီးမှုအောက်တွင် အထီး ကျန်ပျောက်ဆုံးနေသော ယေရုရှလင်မြို့အဖို့ အစာရှောင်ပြီးဆု တောင်းခဲ့သည်။ သူက "ကျွန်ုပ်ထိုင်ပြီးငိုကြွေးသည်၊ မြည်တမ်းပြီး နေ့ရက်များစွာအစာရှောင်ပြီး ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော် တင် ဆုတောင်းခဲ့သည်" ဟုဆိုခဲ့သည်။ (နေဟမိ ၁း ၄ ) ဘုရား သခင်ထံတောင်းလျှောက်ခဲ့သည်။ သူ၏ဆုတောင်းခြင်းသည် [နောက်ဆုံးတွင် အဖြေရခဲ့သည်။] ရှင်ဘုရင်၏နှလုံးသားကိုတို့ထိ ပြီး ဘုရားသခင်သည် နေဟမိအား မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည် တောက်ရန်စေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ သူအဖြေရ သည်အထိဆုတောင်းခဲ့သည်။
ဂျူးလူမျိုးတို့သည် ဆူဆန်နန်းတော်ရှိ ဘုရင်မဧသတာလက် ထက်အချိန်က [မျိုးပြုတ်ကြတော့မည့်အချိန်တွင်] ဘုရားသခင်က သူတို့အသက်ကိုနှမြော တော်မူမည်အကြောင်း အစာရှောင်ပြီးဆု တောင်းကြပါသည်။ ဂျူးတို့သည် အဖြေရသည်အထိ သုံးရက်နှင့် သုံးည အစာရှောင်ဆုတောင်းကြသောအခါ ကယ်တင်ခြင်းကိုတွေ့ ရပြီး သူတို့ရန်သူများကိုလည်း လက်စားချေနိူင်ခဲ့ကြသည်။
နိနဝေမြို့ကလူများသည် အစာရှောင်ပြီးဆုတောင်းကြသဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သူတို့မြို့ကို [နှမြောတော်မူ]သဖြင့် [ဖျက်ဆီး တော်မမူဘဲ နိူးထမှုကိုသာစေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။] ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ [ပ တေကုတ္တေ့]နေ့မတိုင်မှီ တပည့်တော်များသည် အဖြေရသည်အ ထိ [အထက်ခန်းတွင် အတူတကွ] ဆုတောင်းခဲ့ကြသည်။ သူတို့ ၏ဆုတောင်းခြင်းကို ဘုရားသခင်နားညောင်းတော်မူပြီး အဖြေ ပေးတော်မူခဲ့သည်။ နေ့ရက်တော်တော်များများ ဆုတောင်းပြီးပဌ နာပြုပြီးနောက် ဘုရားသခင်က ကြီးမားသည့် နိူးထမှုကြီးကို စေ လွှတ်ခဲ့သည်။ ဂျူးလူသုံးထောင်သည် အံ့ဘွယ်ပြောင်းလဲကြသည် ကို တမန်တော် ၁ နှင့် ၂ တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး တောင်းထား သည့်အဖြေကိုဘုရားသခင်ပေးသည်အထိ တစ်စုံတစ်ခုကို အားမ လျော့ဘဲဆုတောင်းသည့် သာဓကမှာ မှတ်သားဖွယ်ရာဖြစ်ပါ သည်။
တမန်တော်ဆယ့်နှစ် အပိုဒ်ငယ် ၁ မှ ၁၇ တွင် ခရစ်ယာန် များသည် မာရိ၏အိမ်တွင်မည်သို့စုဝေးကြသည်ကို တွေ့နိူင်မည် ဖြစ်ပြီး တမန်တော်ပေတရုသည် ကောင်းကင်တမန်၏အကူအညီ ဖြင့် ထောင်ကလွတ်လာသည်အထိ ဆုတောင်းပဌနာပြုကြသည်။ [သူတို့သည် ပေတရု ထောင်ထဲက အံ့ဩဘွယ်ရာလွတ်မြောက် လာသည်အထိ ဆုတောင်းကြသည်။] ၎င်းသည် ကြာရှည်သော အချိန်ကာလ၊ နှလုံးသားဖြင့်ရှာဖွေသောဆုတောင်းခြင်း၊ နှလုံး ကြေကွဲပြီးဆုတောင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ယင်းသည် နေရာတိုင်းတွင်ရှိသည့် ဓမ္မသစ်ခရစ်ယာန်များအတွက် သာဓက ပင်ဖြစ်ပါသည်။ (John R. Rice, D.D., ဆုတောင်းခြင်း- တောင်း လျှောက်ခြင်းနှင့်ရရှိခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏သားပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၈၁၊ စာ- ၂၀၃၊ ၂၀၆- ၂၀၉၊ ကွင်းထဲရှိသောအချက်များသည် ဒေါက် တာ Hymers ၏ မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။ )
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလေ့လာကြည့်သောအခါ ယေရှုသွန်သင်ခဲ့ သောဆုတောင်းခြင်းနမူနာနှစ်ခုကိုတွေ့ရနိူင်ပါသည်။ ပထမတစ်ချက်ကို ရှင်လုကာ ၁၁း ၅- ၈ တွင် တွေ့ရှိရသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်လေးခုကို ကျေးဇူးပြုပြီး မတ်တပ်ရပ်ဖတ်ကြပါစို့။ ၎င်းသည် Scofield Study Bible တွင် စာမျက်နှာ ၁၀၉၀ တွင် တွေ့ရှိနိူင်ပါသည်။
"တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်တို့တွင်တစုံတယောက်သောသူ၌ အဆွေခင်ပွန်းရှိသည်ဖြစ်၍၊ သန်းခေါင်အချိန်တွင် ထိုအဆွေခင် ပွန်း၏အိမ်သို့သွားပြီးလျှင်၊ အဆွေ၊ အကျွန်ုပ်အဆွေခင်ပွန်းတ ယောက်သည် ခရီးမှလာ၍ အကျွန်ုပ်ထံသို့ရောက်ပါပြီ။ သူ့ကို ကျွေးစရာမရှိသောကြောင့် မုန့်သုံးလုံးချေးနှင့်ပါဟုဆိုသော်၊ အိမ် ရှင်ကလည်း၊ ငါ့ကိုမနှောက်ယှက်နှင့်။ တံခါးပိတ်လျက်ရှိ၏။ ငါ့ သားသမီးတို့သည်၊ ငါနှင့်အိပ်လျက်ရှိကြ၏။ ငါထ၍သင့်အားမပေး နိူင်ဟု အိမ်ထဲကပြန်ပြောသည့်အရာမှာ၊ ငါဆိုသည်ကား၊ အဆွေ ခင်ပွန်းဖြစ်သည်ကိုထောက်၍မထ၊ မပေးသော်လည်း၊ အားမ လျော့ဘဲတောင်း၍နေသောကြောင့်ထ၍ လိုချင်သမျှကိုပေးလိမ့် မည်။" ( (လုကာ ၁၁း ၅- ၈ )
အားလုံးထိုင်နိူင်ပါပြီ။ အပိုဒ်ငယ် ၈ ကိုသတိပြုပါ။ ဤသည်မှာ အဓိက ကျမ်းပိုဒ်လည်းဖြစ်ပါ သည်။
"ငါဆိုသည်ကား၊ အဆွေ ခင်ပွန်းဖြစ်သည်ကိုထောက်၍မထ၊ မပေး သော်လည်း၊ အားမ လျော့ဘဲတောင်း၍နေသောကြောင့်ထ၍ လို ချင်သမျှကိုပေးလိမ့် မည်။" ( (လုကာ ၁၁း ၈ )
ဤနေရာတွင် "အင်ဖော်ကျူနိတီ" ဟူသောစကားလုံးကို ခေတ်သစ်ဘာသာစကားတွင် အသုံး မပြုကြတော့ သို့မဟုတ် နားမလည်ကြတော့ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ "အဆက်မပြတ်ဖိအားပေးခြင်း" ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Rice က "ဤကျမ်းပိုဒ်က [ခရစ်ယာန်များသည်] [မိမိသူငယ်ချင်းမိတ် ဆွေပြောင်းလဲလာရန်အတွက်] တန်ခိုးလိုအပ်သည်အကြောင်းကိုရည်ညွှန်းသည်ဟုဆိုသည်။ ခရစ်ယာန်များသည် ဘုရားသခင်ထံသို့သွားပြီး အခြားသူများ [အတွက်] အသက်မုန့်ကို တောင်းရန် အခွင့်ထူးခံလူများဖြစ်ကြသည်။ အပြစ်သားများအတွက်အသက်မုန့်ဟူသည်မှာ အဆက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းလျှောက်ခြင်း၏လှို့ဝှက်ချက် [ပျောက်ဆုံးသောမိတ်ဆွေအား ကယ်တင်တော်မေူသောကျေးဇူးတော်ကိုပေးသည်တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်း ] သိထားသောသူများအားသာ ပေးတော်မူသည်။ [မိမိ၏မိတ်ဆွေပြောင်းလဲလာရန်] သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်၏သဘာဝလွန်သော၊ အံ့ဘွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းတန်ခိုးကိုလိုလားတောင့်တ သောခရစ်ယာန်တစ်ဦးတွင် ဘုရားသခင်ကို စောင့်စားဖို့ [သူ့မိတ်ဆွေပြောင်းလဲလာသည် အထိဆုတောင်းရန်]အခွင့်အရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။" (Rice, ၎င်း၊ စာ- ၂၀၉ )
"ငါဆိုသည်ကား၊ အဆွေ ခင်ပွန်းဖြစ်သည်ကိုထောက်၍မထ၊ မပေး သော်လည်း၊ အားမ လျော့ဘဲတောင်း၍နေသောကြောင့်ထ၍ လို ချင်သမျှကိုပေးလိမ့် မည်။" (လုကာ ၁၁း ၈ )
တဖန်၊ ဆုတောင်းရန်အကြောင်း လုကာ ၁၈း ၁-၈ တွင် ယေရှုက သွန်သင်ထားပြန် သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး မတ်တပ်ရပ်လျက် ထိုရှစ်ပိုဒ်ကို ဖတ်ကြပါစို့။ ၎င်းသည် Scofield Study Bible တွင် စာမျက်နှာ ၁၁၀၀ တွင်ရှိသည်။
''လူတို့သည် အားမလျော့ဘဲ ကြိုးစား၍ဆုတောင်းမည်အကြောင်း ကို ဥပမာစကားအားဖြင့် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ မြို့တမြို့၌ ဘုရား သခင်ကိုမကြောက်ရွံ့၊ လူကိုအားမနာတတ်သောတရားသူကြီးတ ယောက်ရှိ၏။ ထိုမြို့၌ရှိသောမုဆိုးမတယောက်သည် တရားသူ ကြီးထံသို့သွား၍ ကျွန်မရန်ဘက်ကိုလက်စားချေလောက်အောင် အပြစ်အလျောက် ဒဏ်စီရင်ပါဟု တောင်းပန်သော်လည်း၊ တရား မစီရင်ဘဲ ကြာမြင့်စွာနေ၏။ ထို့နောက်တရားသူကြီးက၊ ငါသည် ဘုရားသခင်ကိုမကြောက်ရွံ့၊ လူကိုအားမနာတတ်သောသူဖြစ် သော်လည်း၊ ဤမုဆိုးမသည် ငါ့ကိုနှောက်ယှက်သောကြောင့် သူ့ ဘက်၌တရားစီရင်မည်။ သို့မဟုတ် အစဉ်လာ၍ငါ့ကိုပင်ပန်းစေ လိမ့်မည်ဟု စိတ်ထဲ၌အကြံရှိ၏။ မတရားသောထိုတရားသူကြီး၏ အကြံကိုမှတ်ကြလော့။ ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူ တို့သည် ညဉ့်နေ့မပြတ် အော်ဟစ်၍ တောင်းလျှောက်လျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ဘက်၌ တရားမစီရင်ဘဲနေတော်မူမည် လော။ ကြာမြင့်စွာသည်းခံတော်မူမည်လော။ ငါဆိုသည်ကား၊ သူတို့ဘက်၌ အလျှင်အမြန် တရားစီရင်တော်မူမည်။ သို့သော် လည်း လူသားသည် ကြွလာသောအခါ ယုံကြည်ခြင်းကို မြေကြီး ပေါ်မှာတွေ့မည်လောဟု သခင်ဘုရားသည် မိန့်တော်မူ၏။" (လုကာ ၁၈း ၁- ၈ )
ဤဥပမာ၏အဓိကအချက်မှာ အားမလျော့ဘဲ ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကို အပ်ိုဒ်တစ်တွင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
"လူတို့သည် အားမလျော့ဘဲကြိုးစား၍ ဆုတောင်းရမည်အကြောင်း ကို ဥပမာစကားအားဖြင့် မိန့်တော်မူသည်ကား၊" (လုကာ ၁၈း ၁ )
ကျွန်ုပ်တို့သည် "အားမလျော့ဘဲ၊ ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းရန်ဖြစ်သည်။" ''အားလျော့ခြင်း" ဟူ သည်မှာ 'အရှုံးပေးထားခြင်း'' ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်မြှောက်အရှုံးပေးထားခြင်းမရှိဘဲ အမြဲတမ်းကြိုးစားဆုတောင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ခုအတွက်ဆုတောင်း လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်အထိ အားမလျော့ဘဲ ဆုတောင်းရမည်။ တိတ်တဆိတ်မနေပါနှင့်။ သင်ဆုတောင်းသောအရာကို မရမချင်း လက်မြှောက်အရှုံးပေးမထားပါနှင့်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်က ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တွင်ရှိစဉ် ကျွန်ုပ် ၏ဆန်းဒေးစကူးကလေးများဖြစ်ကြသည့် ယောင်္ကျားနှင့်မိန်းမများထံက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ခရစ္စ မတ်ကဒ်များစွာကို လက်ခံရရှိပါသည်။ သူတို့ပြောင်းလဲလာသည်အထိ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ဆုတောင်းခဲ့ရသည်ကိုလည်း အတိအလင်း သတိရလျက်နေသည်။ သူတို့သည် နောက်နှစ် ပေါင်းငါးဆယ်ကြာလာသည့်အခါ ခရစ်ယာန်ကောင်းများဖြစ်လာကြသည်ကိုကြည့်ရင်း ကြည်နူး ဝမ်းသာပိတိဝေခဲ့ပါသည်။ သူတို့ထဲက အများတို့ကို လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က ဒေါက်တာ Murphy Lum ၏ စာပနအစီအစဉ်တွင်လည်း တွေ့ခဲ့ရသည်။ သူတို့အားလုံးသည် ခရစ်ယာန်ကောင်းများဖြစ်လာကြသည်ကိုကြည့်ရင်း အရမ်းဘဲ ဝမ်းသာမိပါသည်။
၁၉၆ဝခုနှစ်များက တရုတ်အသင်းတော်သို့ရှိစဉ်အခါ နိူးထမှုလိုအပ်ချက်ကြောင့် ရုန်း ကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်က ဒေါက်တာ Murphy Lum က အသင်းတော် တွင် အများရှေ့မှောက်၌ ဆုတောင်းပဌနာပြုတိုင်း နိူးထမှုအတွက် ဆုတောင်းခဲ့ကြောင်း သတိပေးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အသင်းတော်၌ အစားအသောက်မသုံးဆောင်မှီဆုတောင် ပဌနာပြုသောအချိန်တွင်လည်း ဘုရားသခင်က နိူးထမှုကိုစေလွှတ်ပေးရန် ဆုတောင်းရပေ မည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်တွင်လည်း နိူးထမှုရှိလာရန် ဆုတောင်းလေ့ရှိ ပါသည်။ အခြားသူများကလည်း ထိုအဖို့ဆုတောင်းကြပေမည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်အမှန်အတိုင်း ပြောရလျှင် နိူးထမှုအတွက် ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်စိတ်အားပြင်းပြပါသည်။ ဘုရားသခင်က ဤသို့သောနည်းလမ်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန် အလေးအနက်ဆုတောင်းပြီးတောင့်တခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ခုနှစ်တွင် ဘုရားသခင်သည် နိူးထမှုကိုပေးတော်မူပြီး ၎င်းသည် လေးနှစ်မျှကြာမြင့်ခဲ့ သည်။ ထိုအသင်းတော်၏အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် လူငယ်လေးဆယ်ဦးသည် ကျွန်ုပ်ဧဝံဂေလိတ ရားနှင့်ဆိုင်သောအကြောင်းကိုဟောကြားပြီးနောက်တွင် မျက်ရည်မျက်ခွက်ဖြင့် ရှေ့သို့လာကြ ပါသည်။ ၎င်းမှာ ၁၉၇၂ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်ဖြစ်သည်။ ("ဘုရားသခင်အားဘုန်းကြီးစေ"၊ နှစ်ဆယ်ကြိမ်မြောက်စာအုပ်ငယ်၊ FCBC ၊ မတ်လ ၊ ၁၉၇၂၊ စာ- ၂၈ )
ထိုအသင်းတော်၏ပထမနှစ်နှစ်ဆယ်၏''အကျဉ်းချုပ်"သဘောအနေဖြင့် လူပေါင်း၁၅၀ တွင် ၄၀ ကတုန့်ပြန်မှုပေးလျှင် စာရင်းထည့်သွင်းဖို့လုံလောက်သည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဟု သတ်မှတ်ရပါမည်။ ထိုလူပေါင်းလေးဆယ်မှာ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာပွဲကြီးနှစ်ခုတွင် ဗတ္တိဇံခံကြသည် အကြောင်း အသင်းတော်မှတ်တမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တွေ့ရသည်။(''ဘုရားသခင်အား ဘုန်းကြီးစေ သော" ၊ စာ- ၂၉ ) သူတို့နာမည်များကို မှတ်တမ်းများတွင် ရေးမှတ်ထားပါသည်။ သူတို့အား လုံးလိုလိုသည် ယနေ့တွင် ခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့တွင် အများစုကို ဤလအစော ပိုင်းအချိန် ဒေါက်တာ Lum ၏ အသုဘအစီအစဉ်တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မခြားမလပ်ဆုတောင်းခြင်းကို နားညောင်းတော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိူးထမှုဖြစ်လာရန်အ တွက် အဆက်မပြတ် အားမလျော့ဘဲ ဆုတောင်းပဌနာပြုကြသောအခါ ဘုရားသခင်သည် ၁၉၆ဝခုနှစ်နှောင်းပိုင်း ၁၉၇၀ အစောပိုင်းကာလတွင် ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တွင် နိူးထမှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုနိုးထမှုမပြီးဆုံးမှီတွင် ရာပေါင်းများစွာသောလူငယ်များသည် ထိုအ သင်းတော်သို့ရောက်ရှိလာကြပါသည်။
၁၉၉ဝခုနှစ် အရှေ့ပိုင်းဒေသရှိ ကောကာဆီယမ်အသင်းတော်တွင် နိူးထမှုလိုအပ် သည်ဟု နက်နက်နဲနဲ ကျွန်ုပ်ခံစားလိုက်ရသည်။ တနေကုန် အစာရှောင်ပြီးဆုတောင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် တရားဟောပလ္လင်ဆီသို့ကြောက်ကြောက်နှင့်သွားပြီး ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်တရားဒေသနာဟောတော်မူခဲ့သည်။ သင်းအုပ်က်ိုယ်တိုင်၏သား၊ အသင်းတော် ၌ အကူသင်းအုပ်ဖြစ်သူသည် မျက်ရည်မျက်ခွက်ဖြင့် ရှေ့သို့လာပြီး သူသည် ပျောက်ဆုံးသော သူဖြစ်ကြောင်း၊ ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရန်လိုကြောင်း ဆိုလာသည်။ ည ၁၁ နာရီအ ထိခေါ်ဖိတ်ခြင်းအစီအစဉ်လုပ်ဆောင်သည်။ လူပေါင်း ၇၅ ယောက်ကျော်သည် မျက်ရည်ဖြင့် ပလ္လင်ဆီသို့လာကြသည်။ အသက်ကြီးသူတစ်ယောက်သည် ဝပ်၍လာကာ ဒူးထောက်ပြီး "ကျွန်ုပ်သည်ပျောက်ဆုံးသောသူဖြစ်သည်၊ ပျောက်ဆုံးသောသူဖြစ်သည်" ဟု အော်ဟစ်လေ သည်။ ဘုရားကျောင်းတွင် အမြဲရှိနေသော ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များသည် ရှေ့သို့လာကြ ပြီး မျက်ရည်ဖြင့် ကျေကွဲဝမ်းနည်းကြသည်။ ဒေါက်တာ Ian Paisley ၏သား Kyle သည် ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်သားဖြစ်သူ၏အနားတွင် မတ်တပ်ရပ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်ဇနီးအား " ယခုကဲ့သို့ တစ် ခါမျှမတွေ့ဖူးသေးပါ” ဟု တိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်။ နောက်ထပ်သုံးလကျော်သည့်အချိန် တွင် လူပေါင်းငါးရာသည် လာပြီး သူတို့အားလုံးသည် စိတ်နှလုံးထဲတွင် အမှန်တကယ်ငိုကြွေး မြည်တည်းကြသည်။ သင်အုပ်ဆရာသည် အချိန်တိုအတွင်း၌ ရာပေါင်းများစွာသောသူတို့ကို ဗတ္တိဇံပေးတော်မူခဲ့သည်။ မကြာသေးခင်က နာမည်ကျော်ဖန်တမင်တယ်နှစ်ခြင်းတရားဟော ဆရာတစ်ပါးက သူသည် ထိုသို့သောနိူးထမှုကို မတွေ့မမြင်ဖူးကြောင်းပြောခဲ့သည်ကို ကြားခဲ့ ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အဆက်မပြတ် အားမလျော့ဘဲဆုတောင်းခြင်းအဖြေအဖြစ် နိူးထမှုကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တွေ့ရသည်မှာ ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်တရာဆု တောင်းပဌနာပြုလျှင် ဘုရားသခင်သည် နိူးထမှုကို အတိတ်ကလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်အတိုင်း အမှန်တကယ်စေလွှတ်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မခြားမလပ်ဘဲ အားမလျော့ဆုတောင်းလိုက်သည့်အချိန်တွင် ဘုရား သခင်က နားညောင်းတော်မူကြောင်းသိရသည်။ ကျွန်ုပ်အမေသည် အသက် ၈၀ ရှိပြီး မပြောင်း လဲသေးပါ။ သူမကို အချိန်မရွေးသေစေနိူင်တဲ့ လေဖြတ်ရောဂါရှိသည်။ သူသည် ငရဲကိုသွားနိူင် သည်။ သို့သော် သူမ၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်အမှန်တကယ်ဆုတောင်းခဲ့ သည်၊ နေ့တိုင်းဆုတောင်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးသောနေ့ရောက်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်သည် အဆုံးထိဆုတောင်းသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် နယူးယောက်တွင် တရားဟောနေ သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဒေါက်တာ Cagan ထံသို့ဖုန်းဆက်ပြီး သူမကို ခရစ်တော်ထံသို့ဦးဆောင် သွားရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူမက "ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ခြင်း" နှင့်ပါတ်သက်ပြီး ပြောဆိုခြင်းကို မကြိုက်နှစ်သက်သည်ဖြစ်၍ သူမကိုဦးဆောင်ရန် သူသည် ကြောက်ရွံ့နေမိ သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်သည် ဒေါက်တာ Cagan အား ကျွန်ုပ်အခုထိဆုတောင်းပဌနာပြုသည်၊ ထိုနေ့တွင် သူမကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်မည်ဟု ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲတွင် သိသည်ဟု ပြောလိုက်သည်။ ဒေါက်တာ Cagan သည် သူမအခန်းထဲသို့ ထိုညနေပိုင်းတွင် ဝင်သွားခဲ့ သည်။ အဘယ့်ကြောင့် အရမ်းလွယ်ကူနေရသနည်း။ အမေက ချက်ချင်းပင်ပြောင်းလဲလာ သည်။ ကျွန်ုပ်သည် အတူတကွပေါင်းစည်းသည့်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာအစီအစဉ်တွင် ဒေါက်တာ Waldrip ၏ဘုရားကျောင်းတွင် ထိုနှစ် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်က ဗတ္တိဇံပေး ခဲ့သည်။ အမေသည် အသက် ၈၀ တွင်ပြောင်းလဲလာပြီး ထိုခဏချင်းတွင် ခရစ်တော်၌ လူသစ် ဖြစ်လာသည်။ .
သင်သည် လူတစ်ဦးကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်တိုင်အောင် ဆုတောင်းနိူင် မည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်။ နိူးထမှုရရှိသည်အထိ၊ အသင်းတော်၌ တောင်းသမျှကိုရရှိသည်အထိ ဆုတောင်းနိူင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ အသင်းတော်၌ရှိသောမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပြောင်း လဲလာသည်အထိ ဆုတောင်းနိူင်မည်ဟု ထင်မိသည်။ သင်လည်း ထိုသို့ယုံကြည်မှုရှိမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ယနေ့ ဤနေရာသို့ရောက်ရှိလာသော ပျောက်ဆုံးသူများအတွက် စတင်ဆု တောင်းလျှင် ထိုသူအတွက် အားမလျော့ဘဲ ဘုရားသခင်က အဖြေပေးသည်အထိ ဆုတောင်း ပါ။ အာမင်!
ကျွန်ုပ်တို့သည် လာမည့်စနေနေ့တွင် နောက်တဖန် အစာရှောင်ဆုတောင်းကြပါမည်။ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းတွင် လာရောက်ပူးပေါင်းနိူင်လျှင် သောကြာနေ့ညနေစာစားပြီး နောက်တွင် နောက်နေ့ စနေနေ့ညနေစာကို ညနေ ၅း ၃၀ တွင် အသင်းတော်၌ စားကြသည် အချိန်အထိ အစာမစားပါနှင့်။ သင်တို့သည် စနေနေ့တွင် အစာရှောင်ပြီးဆုတောင်းကြသော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုရမည့်စာရင်ကို ဤနေရာတွင် ရေးသားထားပါသည်။ ထိုစာရင်းကို တ ရားဒေသနာအပြီးတွင် ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အိမ်သို့ယူသွားရမည့်ကော်ပီကို သင်တို့အား ငါပေး မည်။
ကျွန်ုပ်သည် သင်တို့ကို ဂုဏ်ယူပါ၏။ သင်တို့သည် အလွန်ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်ပါ၏။ သင်တို့က သူတို့အတွက် အစာရှောင်ပြီးဆုတောင်းကြသည်ဖြစ်၍ လူများစွာတို့သည် လူငယ် များစွာတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းကို ရောက်ကြလိမ့်မည်။ ဒေါက်တာ Chan ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွြန်ုပ်တို့အား ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ဦးဆောင်ပါအုံး။
၁။	သင်၏အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို တိတ်တဆိတ်လုပ်ဆောင်ပါ။ (အဖြစ်နိူင်ဆုံး ) သင်သည် အစာရှောင်ဆုတောင်နေသည်ကို လှည့် ပတ်ပြောဆိုရန် မလိုအပ်ပါ။
၂။	သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ဖို့အချိန်ယူပါ။ တမန်ဝတ္ထုအချို့အပိုင်းကို ဖတ်ပါ။ (အစက ဖတ်ပါ။)
၃။	စနေနေ့ အစာရှောင်နေစဉ်အတွင်း ဟေရှာယ ၅၈း ၆ ကို အလွတ် ကျက်ပါ။
၄။	ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေထိုင်ဖို့ လူ ၁၀ ယောက် သို့မဟုတ် ထိုထက်များ သည့်အရေအတွက်ကို ပေးရန် ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းပါ။
၅။	မပြောင်းလဲသေးသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ်များ၏ ပြောင်းလဲခြင်းအ တွက် ဆုတောင်းပါ။ ဟေရှာယ ၅၈း ၆ တွင် မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း သူတို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်အား ဆုတောင်းပါ။
၈။	ရေများစွာ သောက်သုံးပါ။ တစ်နာရီလျှင် တစ်ခွက်စီသောက်ပါ။ နေ့တိုင်းလက်ဖက်ရည် သောက်လေ့ရှိလျှင် အစပိုင်းတွင် မတ်ခွက် ကြီးဖြင့် ကော်ဖီသောက်သုံးနိူင်ပါသည်။ နူးညံ့သောအရည်၊ ပါဝါအ ရည် စသည်တို့ကို မသောက်သုံးပါနှင့်။.
၉။	သင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး သံသယဖြစ်လျှင် အစာမရှောင်မှီ ဆရာဝန်နှင့်ပြပါ။ (ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင်ရှိကြသည့် Dr. Kreighton Chan သို့မဟုတ် Dr. Judith Cagan ကို ပြသနိူင်သည်) အရေးကြီးသည့်အခြေအနေဖြစ်သည့် ဆီးချိုရောဂါ သို့မဟုတ် သွေး တိုးရှိလျှင် အစာမရှောင်ပါနှင့်။ ဤအချက်တွေကို ဆုတောင်းရန်သာ စနေနေ့ကို အသုံးပြုပါ။
၁၁။	ဆုတောင်းရန် အရေးအကြီးဆုံးသောအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့အသင်း တော်ရှိလူငယ်များပျောက်လဲလာရန် ဖြစ်သည်ကို သတိရပါ။ ထိုအ ပြင် ယနေ့အချိန်တွင် အသင်းတော်၌ရောက်ရှိလာသောလူငယ်များ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ရေရှည်နေထိုင်သောသူများဖြစ်ရန် ဆုတောင်းပါ။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစစတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လုကာ ၁၈း ၁- ၈